अमेरिका र तालिबान बीचको वार्ता सकियो, के–के भयो प्रगति ? | Ratopati
अमेरिका र तालिबान बीचको वार्ता सकियो, के–के भयो प्रगति ?
एजेन्सी– संयुक्तराज्य अमेरिका र तालिबानबीचको वार्ता गएराति सकिएको छ । यी दुई पक्षबीचको यो आठौँ चरणको वार्ता भएको थियो । तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद्दीनले कतारको राजधानी दोहामा भएको सो वार्ता गए राति सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी शान्तिदूत जलमी खालिजादले आइतबार ट्वीट गरेका थिए– मलाई लाग्छ अफगानिस्तान युद्धमा रहेको यो नै अन्तिम इद हुनेछ । उनको यो ट्वीटबाट पनि वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको अनुमान गरिएको समाचारमा जनाइएको थियो । तर यस विषयमा अमेरिका र अफगानिस्तानका सरकारहरुले भने केही बताएका छैनन् । –एएफपी
नयाँदिल्लीका हिंसा पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउने केजरीवालको निर्णय